China PVC lamba Prrof orana, lamba manaporofo orana PE, orinasa mpamokatra kamiao ary mpanamboatra | Boda
Ny lamba tsy misy orana dia be mpampiasa amin'ny fandrakofana entana sy mivezivezy eny an-tsaha toy ny fiara, sambo, ozinina ary toeram-pitrandrahana. Izy io dia manana ny toetran'ny fanoherana ny masoandro, ny fanoherana ny fanala, ny fanoherana ny fahanterana, ny fanoherana ny harafesina, ny lanja maivana, ny famonosana ary ny faharetana.
Fitaovana: polypropylene na polyethylene density: 9 × 9 hatramin'ny 14 × 14 ny sakany: 1.65m ka hatramin'ny 12m
Araka ny filan'ny mpanjifa:
Milanja: 60 ka hatramin'ny 360gsm
Double lafiny tsy tantera-drano, zoro efatra tokana mivalona famehezana famehezana; tady manamorona ny sisiny hanaovana asa raikitra, ho an'ny fiara fialam-boly, kamio, sambo, toeram-panorenana, kitay, nefa koa misy kamio, tranofiara, fitaovana, tany, famonjena vonjy taitra, sary hosodoko, sns. Ny vokatra dia manana tombony azo avy amin'ny rano, porofo mangatsiaka, sunscreen, anti-aging, fanoherana UV, mateza, fanoherana tsindry, fanoherana mivalona, ​​fanoherana ny harafesina, fivezivezena, tombony ara-toekarena sy azo ampiharina. Ny vokatra dia mety amin'ny fitehirizana, fananganana, lainy isan-karazany, palitao artillery, ozinina sy orinasa mpitrandraka, seranan-tsambo, wharves, greenhouse isan-karazany, fiara, sambo, fiaramanidina ary fomba hafa fitaterana sy entana malalaka manarona sy miaro.
Fampidirana vokatra vita amin'ny lamba tsy misy rotsakorana PVC: vita amin'ny labazy maitso matevina, fantatra koa amin'ny hoe labasy vita amin'ny PVC, nopetahany lamba vita amin'ny polyester avo lenta, nopetahany résin-polyvinyl chloride (PVC), nanisy akora hafainganam-pandeha, mpamono ahitra, mpiasan'ny anti-antitra, mpiady anti-static ary hafa additives simika, vita amin'ny plastika amin'ny hafanana ambony. Miaraka amin'ny tantera-drano tsy misy rano, porofo manify, fanoherana ny hatsiaka, fanoherana ny fahanterana, fanoherana ny static ary fananana hafa, dia azo zahana amin'ny habe sy modely isan-karazany arakaraka ny filan'ny mpanjifa izany. Rehefa manamboatra, ny lafiny efatra amin'ny lamba menaka dia mifono, ny zorony efatra sy ny lafiny efatra dia misy bokotra ary malalaka daholo ny tanana
Ny mampiavaka ny lamba tsy misy orana amin'ny PVC sy ny teboka hisarihana ny saina amin'ny fampiasana azy:
1. Izy io dia manana ny asan'ny tsy tantera-drano, ny orana, ny takona-masoandro, ny porofon'orana, ny fihenan-tsolika, ny aforeto ary ny toetr'andro, ary manana ny toetran'ny fanoherana ny asidra sy ny alkaly, ny fanoherana ny hafanana avo, ny fanasana sy ny fametahana azy.
2. Ity vokatra ity dia tokony hisoroka fitaovana maranitra vy maranitra ampiasaina
Mampiasà sy fikojakojana fahalalana ny lamba tsy misy orana amin'ny PVC:
1. Rehefa ampiasaina ny labasy vita amin'ny PVC, dia tokony hialana amin'ny fikikisana ny lamba amin'ny fitaovana maranitra izy io, izay hitarika ny fihenan'ny fampisehoana tantera-drano amin'ny lamba.
2. Aorian'ny fampiasana tarpaulin an'ny PVC dia tokony hivelatra, maina ary fonosina hampiasaina indray.
3. Rehefa apetraka sy tehirizina ireo labasy vita amin'ny PVC, dia tokony harovana amin'ny hamandoana sy ny biby mpikiky izy ireo. Tokony ho maina tsy tapaka izy ireo arakaraka ny hamandoana sy ny toetrandro eo an-toerana.
4. Nandritra ny fitaterana ny terpaly PVC, ny hery dia tokony ho araka izay azo atao mba hisorohana ny fonosana ivelany tsy ho simba ary ny quilt insulation tsy ho triaraky ny herisetra.
5. Ny labasy vita amin'ny PVC amin'ny ankapobeny dia tsy misy afo mirehitra, noho izany dia tokony hotazomina lavitra ny loharanon'afo izy io rehefa ampiasaina, indrindra rehefa tehirizina.
6. Rehefa mivelatra ny labasy vita amin'ny PVC dia ilaina ny misoroka ny fahasimban'ny lamba firakotra ateraky ny fisintonana ny tany.
7. Alohan'ny hamelarana ny terpotra PVC, ny tany dia tokony hojerena mba hanesorana zavatra maranitra hisorohana ny fahasimban'ny lamba eo ambonin'ilay lamba firakotra.
Amin'ny ankapobeny, ny lamba dia vita amin'ny polypropylene na polyethylene. Ny lamba orana dia karazan-damba misy fiasa manaporofo ny orana.
BOSENDA dia manome fonosana lamba tsy misy rano / porofon-drano miaraka amin'ny antsipiriany feno, ho an'ny antsipiriany bebe kokoa, aza misalasala mifandray aminay.
Previous: Masinina welding, milina fantsom-pifandraisana DC, milina fantsom-bozaka AC, saron-tava fantsom-bozaka, kojakoja fanjairana
Manaraka: Padlock, hidy varahina fakan-tahaka, hidy vy tsy misy fangarony, hidin-dravina, hidy fanoherana ny halatra, hidim-baravarana miafina, hidin-tànana sy hidin-trano hafa
Pvc lamba fanamarinana orana
Lamba fanamarinana orana
Lamba tsy tantera-drano